Enweghị M Mpi | Martech Zone
Amaara m na nke ahụ dị mpako. Anaghị m ekwu ya n'ụzọ ahụ. Mgbe ọ bụla onye ọ bụla kwuru banyere asọmpi n’otu ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ, ana m akwa m emo. Enwere m mgbe niile. Otu onye gwara m otu oge na ọ gaghị ekwe omume ile anya n'azụ gị ma ka na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. Ekwenyere m na egwu na-akpọnwụ ụlọ ọrụ.
Ekwere m na ngalaba-opetition.
Anaghị m akwado eleghara gị mpi… ụlọ ọrụ ọ bụla kwesịrị ịghọta uru ha na-eweta na tebụl. Otú ọ dị, ihe dị mkpa karịa uru ịsọ mpi gị bụ ma e nwere ihe jikọrọ uru ndị ahụ na nke ahụ mkpa n'ezie nke ndị ahịa. M na-azụ ahịa m site na ncha ugbu a na n’ụbọchị ndị mbụ m malitere ọrụ ọ bụla m nwere ike iji hụ na m nwere ike ịnọ n’elu mmiri. Na azụ, nke ahụ abụghị ezigbo mkpebi… M gaara ekwu ọtụtụ n'ime ọrụ ndị ahụ na ndị ahịa gaara enwe obi ụtọ, ma eleghị anya nwee obi ụtọ.
Ihe m na-elekwasị anya ugbu a bụ ịmepụta mmekọrịta na nnukwu ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze, ma na-aga n'ihu ịbawanye mmekọrịta mụ na ndị ahịa buru ibu. Izu a, Agam ekwuola m ezigbo olile anya nke abuo mpi. Ọ bụ ihe ziri ezi ịme. Apụghị m inye mmekọrịta ndị a na uche ha kwesịrị ka m enweghị ego iji hụ na ha nwere ihe ịga nke ọma… yabụ gịnị kpatara m ga-eji tinye aha m n'ihe egwu na ya?
N’ebe a na Indianapolis, enwere otutu ndi nwere nka nke nwere ike inye oru ndia m nyere. Likelọ ọrụ dị ka Kpọmkwem Ngwaọrụ, Right Na mmekọrịta, Ngwakọta, na ọtụtụ web imewe na mmepe ụlọ ọrụ nwere ngwaahịa na ọrụ m nwere ike inye… ma agaghị m. Ha nwere ego, akụrụngwa, nkwado ndị ahịa na akụrụngwa m na enweghị. Nke ahụ kaara onye ahịa ahụ uru.
Na Social Media n'akụkụ, e nwere nnọọ ole na ole n'ime anyị na obodo… niile onye m kwere bụ ndị enyi m. Ka anyị na-erute ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ na obodo, onye ọ bụla n'ime anyị ga-eweta echiche nke anyị na tebụl. Enweghị m nchegbu banyere ịsọ mpi na ha na ọkwa a. Ọzọkwa, enwere m nchegbu karịa na ụlọ ọrụ ahụ nwetara nri ihe enyemaka. Ọ bụrụ na m na-ezo aka na ha ma ọ bụ ihe ịga nke ọma, anyị niile na-emeri. M dị oke mma maka ịkọwa ha, asọmpi m na-enweta azụmaahịa, m ga-enwetakwa oku mbụ na ohere ọzọ, kwa.
N'oge na-adịbeghị anya, otu nnukwu ụlọ ọrụ (nke buru ibu) nyere m ebe m ga-arụgide m inye ha ụfọdụ ọrụ n'efu. Nanị ihe m mere bụ ịgwa ha onye ọrụ ibe m nke buru ụzọ lelee m. Mgbe nke a laghachiri azụ, ha laghachikwute m wee mee ka ha mara na enweghị m mmasị.
N'akụkụ nke ọzọ, enwere ụlọ ọrụ ole na ole n'obodo ahụ ugbu a ji mpako na-eyi ego nke njikarịcha njin ọchụchọ ma ọ bụ ọkachamara mgbasa ozi mmekọrịta. Agbanyeghị na ha etinyeghị onye ọ bụla na ndị ọrụ ha nwere nka ahụ, ma ha enwebeghị nsonaazụ ọ bụla na ndị ahịa na mpaghara ndị ahụ, ha na-aga n'ihu na-eri anụ na ụlọ ọrụ ndị na-achọ ọrụ ndị ahụ. Ha bụ ndị nwere ohere, na-enye ọrụ ọ bụla onye ọ bụla chọrọ ịjụ banyere ya. Enweghị m mmasị na ihe ha na-eme ma ana m ekwu okwu megide ha mgbe ọ bụla enwere ike.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a search engine njikarịcha na-eweta ọrụ, chọọ nyocha ụfọdụ ị ga - ahụ onye na - emeri mmeri. Ọ dị mfe. Ọ bụrụ na ị na-achọ a onye soshal midia, gaa ihe omume mpaghara ụfọdụ, chọpụta onye malitere netwọkụ mpaghara na-aga nke ọma, ma lelee onye nwere nnukwu ihe. Ọ ga-apụta ìhè nke ọma onye nwere nka na onye na-enweghị. Ndị na-eji ohere ahụ eme ihe hapụrụ akwa anya mmiri.
Ekwetaghị m na m nwere asọmpi. My ọrụ bụ ịhụ ma ọ bụrụ na m a kwesịrị ekwesị n'ihi na ihe mgbu na ụlọ ọrụ nwere. Ọ bụrụ na m bụ a dabara, M na-aga n'ihu. Ọ bụ ya mere m ekere òkè na-eto eto, M na-ọzọ oge na-arụ ọrụ na ihe m na-enwe mmasị, m ahịa na-ahụ na nsonaazụ ha chọrọ, na m obi ụtọ happy ma ka mebiri;).
Kedu ihe ị chere? Ị nwere n'ezie nwee asọmpi ọ bụla?
Tags: azụmahịammekọrịta azụmahịangalaba-opetitionmpiarụkọ ọrụNkwado ire ahịa
Nov 17, 2009 na 2:48 AM
Ọ dị mma ka ị rụọ ọrụ bụ ijide n'aka na ụlọ ọrụ ndị chọrọ ka gị na ha zụọ ahịa nwere ike isoro gị kerịta ebumnuche na ụkpụrụ gị imekọ ihe ọnụ. Mana ọ dị mma ịmara na ịmeela ịtụgharị na ịme ihe ọ bụla onye ahịa ọ bụla gwara gị ka ị mee naanị n'ihi na ha jụrụ ya.
Nov 17, 2009 na 3:17 AM
N'uche banyere uche, emeela m Matt. A ka nwere ụfọdụ fọdụụrụ m ga - ejikwa, agbanyeghị. 🙂
Nov 17, 2009 na 2:53 AM
"Otu onye gwara m otu oge na ọ gaghị ekwe omume ile anya n'azụ gị ma ka na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ."
Ekwenyere m kpamkpam! N'oge na-adịbeghị anya anyị nwere ụlọ ọrụ abụọ na-enye ọrụ yiri ya na-akpọ ma mee ka hà nwere mmasị iji ọrụ anyị. Ha doro anya nke ọma, ọbụnadị ịgwa anyị aha onye zoro ha. Ya mere, mgbe ha na-dejupụta fọm na weebụsaịtị anyị, na-akpọ ma na-ahapụ ozi olu ozi olu, ma na-ezigara anyị ozi maka ozi ndị ọzọ anyị na-agwa ndị ahịa chọrọ. Ha gaara etinye oge ha nke ọma n'ịgwa atụmanya na inye nnukwu ndị ahịa ọrụ.
Ma ihe ndị ọzọ, ekwenyere m. Mara ikike gị. ike na akụrụngwa. Mee ka gị na ndị gị na ha na-emekọrịta ihe. Onye ọ bụla meriri mgbe ahụ.
Nov 17, 2009 na 3:05 AM
Ọmarịcha post, Doug. Eji m obi m niile na-ekweta.
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịmara ntụgharị asụsụ Latin nke asọmpi mbụ bụ, "Togbalịkọ ọnụ maka ọdịmma nke mmadụ niile." Echiche nke ndị mmeri na ndị meriri ewebata site na French na 16th Century. Hapu ya Frog, eh?
Nov 17, 2009 na 3:18 AM
Okwu di egwu, Amy! Aghọtaghị m na… nwa nwoke anyị na-emejọ okwu ahụ ebe a na US!
Nov 17, 2009 na 5:24 PM
Ekwenyere m kpamkpam na gị na ọtụtụ ndị na-ewe ndị ọrụ ọrụ na ebumnuche SEO ha na-anwa ịnweta ọrụ n'efu. Daalụ maka isi elu.
Nov 17, 2009 na 6:49 PM
Enweghị m ike ikwenye na nke a. Echere m na ụzọ dị ogologo oge nọrọ na-elekwasị anya na-echegbu onwe banyere ndị asọmpi. Karịsịa n'ahịa dị ka mgbasa ozi dị ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na SEO, nke na-eto ngwa ngwa, enwere ọtụtụ ohere maka asọmpi, ọ ga-abụrịrị na ị ga-anwụ n'ihi na ị naghị adabara ndị ahịa karịa n'ihi na ndị asọmpi gị na-eri nri ehihie gị. .
Nov 17, 2009 na 10:03 PM
Doug - dị ka mgbe ọ bụla, enwere m mmasị ịbịaru nso gị. Anọ m na-eche mgbe niile na mgbe ọ na-ekwu maka ndị na-ezo aka na nke ịme azụmahịa ahụ n'onwe gị, ọ bụrụhaala na onye ahịa ahụ nwere obi ụtọ, ha ga-echeta na had nwere ha obi ụtọ, ọbụlagodi na ọ bụ naanị Ntuziaka. A ije dị mma dị ka ihe ọkụkụ, nri?
Na mgbakwunye, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-achọkarị iguzosi ike n'ezi ihe niile nke ịmara na ha na-arịọ maka ihe ị na-enweghị ike ma ọ bụ na ị gaghị anwa ịnye na ime ihe n'eziokwu banyere ya. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ejighị nke ahụ kpọrọ ihe ma na-echegbu onwe ya maka ịchekwa ego, yabụ na ịchọghị ha maka ndị ahịa agbanyeghị, nri? Mfe ikwu na siri ike na-eso site na nke ugbu a aku na uba, ma okwu ka na-ebi ndụ site live ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ okwu ka nnyefe site.
Nov 17, 2009 na 11:20 PM
Doug, ekwenyere m na mgbe ị na - eji oge gị dị oke egwu na-echegbu onwe gị maka ihe asọmpi a, ị bụ: (1) orednọ nkịtị gwụrụ na enweghị mgbado anya, ma ọ bụ (2) ị maghị ihe ụzọ gị kwesịrị ịbụ. Bụ onye na - aga n’ihu n’adịghị emeghachi omume na gburugburu gị bụ nkamke nke ihe ịga nke ọma.
Nov 21, 2009 na 3:33 AM
Doug - Akwa post! Ana m echeta n’oge m bidoro ọrụ ọtụtụ ndị ụlọ ọrụ jiri okwu agha: agha, agha, atụmatụ, ụzọ aghụghọ, wdg. Anyị nọ na-echegbu onwe anyị banyere ihe ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eme. Mụ na ụlọ ọrụ m, enweghị m ike iche gbasara ụmụ nwoke ndị ọzọ. Anyị ga-elekwasị anya na ịnapụta ngwaahịa na ọrụ kacha mma anyị nwere ike maka ndị ahịa anyị. Oge ụfọdụ anyị esila na "ohere" dị iche iche pụọ; n'oge ndị ọzọ anyị nyefere ha onye ọzọ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-agagharị, n'echiche m, ọ bụrụhaala na anyị lekwasịrị anya na uru anyị bara na tebụl.
Jun 5, 2012 na 1:51 AM
Enwere m mmasị na nkà ihe ọmụma gị nke itinye mkpa ndị ahịa
mbụ dị ka m bụ nnukwu onye ofufe nke inye ahụkebe ndị ahịa ọrụ. Achọrọ m ịma
ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị ị na-eziga ndị ahịa na-alaghachi ihu ọma ma ọ bụrụ
ha na-ahu onye ahia ha adabaghi. You na-enweta ọtụtụ ndị na-ezigara ha
ma obu ikwenye na karma nke inyere ndi ahia aka?